Ajụjụ A Na -ajụkarị - Ndị Na -ege Ntị Ajụjụ Ndị A Na -ajụkarị
Ebumnuche nke AudienceGain bụ inyere ndị na-emepụta ọdịnaya gburugburu ụwa aka itinye ikike Social Media iji kwalite ma ọ bụ kpata ego site na vidiyo ha n'ofe usoro iwu dịka YouTube, Facebook, TikTok, Twitch n'ụzọ ndị kachasị ọsọ. Mgbe afọ ise gachara na Social Media Marketing, anyị nwere ahụmịhe zuru oke iji nye usoro kachasị mma, azịza iji mee ka mmadụ niile nwee ike itolite nke ọma na nyiwe ndị a. Site na otu ndị na-eto eto raara onwe ha nye na ndị nwere ọrụ, AudienceGain enwetala afọ ojuju nke karịa ndị ahịa 50,000 n'ụwa niile mgbe ha jesịrị ọrụ ahụ. N'ikpeazụ, anyị nwere obi ike iwetara ndị mmadụ ihe kachasị mma na nsonaazụ ndị ahịa anyị n'ọma ahịa ga-abụ ihe akaebe.
Kedu ka ndị na-ege ntị na-adị nchebe?
Na AudienceGain, ahụmịhe ndị ahịa na ụlọ ọrụ anyị bụ ihe kachasị anyị mkpa. Nwere ike ikwu, ihe na-eme ka ndị ahịa na-echegbu onwe anyị, anyị ga-eme ya ọfụma. Nke ahụ bụkwa ihe kpatara anyị ji ekwe ka Paypal dị ka ụzọ isi akwụ ụgwọ maka weebụsaịtị. Dị ka ị maara, ọ dịghị ụzọ ị ga-esi wayo na ikpo okwu a n'ihi na Paypal ga-echebe ego gị ruo mgbe iwu ahụ mechara. Agbanyeghị, anyị nwekwara usoro ịkwụ ụgwọ ndị ama ama dịka Bitcoin, Skrill, Ego zuru oke, Westen Union, Payoneer, bụ ndị a kwadoro.
Enwere akaụntụ nbanye akaụntụ m na AudienceGain?
Nke a ọ bụ ịkwụ ụgwọ otu oge ma ọ bụ mmegharị ọnwa ọ bụla?
Nkwụ ụgwọ niile bụ otu oge. Enweghi imeghari.
Ọ bụrụ n ’ihe ndapụta nke izu mgbe ị zụrụ ọrụ ahụ, ị ​​ga-ejupụta ọzọ?
N'ọtụtụ oge, ọ naghị eme ma ọ bụrụ na ọ na-eme maka ụfọdụ ihe atụghị anya, anyị ga-elele ya ma mejupụta ya ozugbo.
Inyefefe na-adị mgbe niile nke nwere ike ichedo uru ndị ahịa n'ụzọ kachasị mma. Yabụ enwere ike ijide gị kpamkpam mgbe ị na-eji ọrụ anyị.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji nweta nkwenye email?
Nọmalị, a ga-eziga email nkwenye ozugbo ịkwụchara ụgwọ ahụ. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike were awa ole na ole iji nweta ya ma ọ bụrụ na sistemu karịrị.
Oke kachasị elekere 8 ma ọ bụrụ na ịnabatabeghị ozi nkwenye ahụ, biko zitere anyị email ma ọ bụ nkata ndụ, anyị ga-enyocha ya.
Enwere m ike ịtọ vidiyo ma ọ bụ akaụntụ m mgbe iwu na-agba ọsọ?
Onye ahịa kwesiri ịma na Ọnọdụ Onwe na-akwụsị usoro nnyefe na usoro nyocha. N'ihi ya, ịtụ ahịa ndị ahịa ga-esi ike ị nweta nsonaazụ kacha mma.
Ọ bụrụ na ị ga-eji Onwe Onwe, biko gwa anyị okwu tupu anyị amalite iwu. Anyị ga-agbanwe atụmatụ dabara maka gị.
Nsonaazụ ga-eme ka ọ kwụsie ike mgbe ị mechara iwu ahụ?
Eeh. Ozugbo anyị mechara iwu ahụ, a ga-eme ka ọ kwụsie ike.
Nke a ọ bụ ọrụ uto eke?
Ee, anyị ga-eme ike anyị niile iji wetara gị nsonaazụ ya dịka o kwere mee. Ọ na - enyere akaụntụ / ọwa aka ka ọ bụrụ ọkachamara ma dịkwa mfe iji dọta uche ndị na - ege ntị.
Biko gụọ nkwekọrịta a nke ọma tupu ịzụta ọrụ ndị na-ege ntị. Site na ịzụta ọrụ ndị AudienceGain, ị na-egosi nnabata nkwekọrịta a yana usoro ya na ọnọdụ ya. Accessnweta na iji ọrụ nke Ndị Na-ege Ntị, ị na-etinye aka na usoro na ọnọdụ niile etinyere na nkwekọrịta Usoro na Ọnọdụ a. Usoro na ọnọdụ ndị ọzọ nwere ike ịmetụta mpaghara ndị ọzọ nke weebụsaịtị ma ọ bụ na mkparịta ụka ma ọ bụ ọdịnaya etinyere na saịtị ahụ, yana njikọ nke Usoro Ojiji. Inye ndị na-ege ntị nwere ikike ịgbanwe mgbanwe na Usoro na Ọnọdụ oge ọ bụla. Ndị ahịa na-eji webụsaịtị nke ndị na-ege ntị kwenyere ịgbaso mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla ma ha dabere na Usoro Ojiji eji emezi ihe. Ederede ụbọchị edegharịrị nke Usoro Ojiji Usoro Edepụtara n'okpuru.
Ndị na-ege ntịGain chọrọ naanị ozi nzuzo nke na-enyere ịchụso ọrụ ahụ aka. A ga-ewere ihe ọ bụla ma ọ bụ ozi ọzọ ezitere na weebụsaịtị ahụ na-enweghị nzuzo. Na-enye ndị na-ege ntị ikikere nnwere onwe a na-apụghị ịgbagha agbagha iji, gosipụta, ma kesaa n'ozuzu ma ọ bụ n'akụkụ, nrubeisi n'ụzọ ọ bụla masịrị ya.
Mgbasa Ozi Marketingzọ nke Atọ
May nwere ike ịgaghị agba ahịa mgbasa ozi ndị ọzọ mgbe mgbasa ozi ị na-ege AudienceGain na-agba ọsọ. Anyị na-eji ọnụ ọgụgụ ọha na eze tụọ nsonaazụ mgbasa ozi anyị, nke mkpọsa ndị ọzọ nwere ike igbochi. Ọ bụrụ n’ị na-agba mgbasa ozi ahịa ndị ọzọ n’otu oge na mkpọsa ahịa AudienceGain, mgbe ahụ ị kwenyere na AudienceGain bụ ọrụ maka onye ọ bụla na-akwado ya, onye na-eso ụzọ, echiche, ikwu okwu, dịka, gaa, na / ma ọ bụ votu ị nwetara n’oge oge mkpọsa ahịa AudienceGain gị.
Usingkwụsị Mgbasa Ozi
Site na ịbanye na ọrụ AudienceGain, ị kwenyere na ndị na-ege ntị nwere ikike ịkwụsị mkpọsa gị maka ebumnuche ọ bụla na enweghị ọkwa ọ bụla. Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ anyị mgbe niile iji wepụta usoro gị ngwa ngwa na nchekwa dịka o kwere mee; Agbanyeghị, enwere ike ịnwe ọnọdụ ụfọdụ dịka ibe na-efunahụ ndị na-eso ụzọ, echiche, mmasị ma ọ bụ nkwalite emere na Social Network nke nwere ike ime ka ịkwụsị mkpọsa gị dị mkpa. Usingkwụsị mkpọsa anaghị eme ka ị ruo eruo maka nkwụghachi ọ bụla ma ọ bụ zuru ezu.
Akaụntụ / Video Gbanwee
May nwere ike igbanwe, gbanwee, na / ma ọ bụ wepu akaụntụ gị, aha njirimara, foto, na / ma ọ bụ vidiyo mgbe mgbasa ozi ahịa AudienceGain gị na-agba ọsọ. Ime nke a nwere ike ime ka ịnweghị ike ịnweta akaụntụ gị, foto na / ma ọ bụ vidiyo gị wee mebie ọrụ anyị. Agree kwenyere na mgbanwe ọ bụla, mgbanwe, na / ma ọ bụ iwepụ akaụntụ gị, aha njirimara, foto na / ma ọ bụ vidiyo na-enweghị ọkwa na nkwenye sitere na AudienceGain, ga-eme ka usoro (s) metụtara gị dabere na njedebe na enweghị ike maka ụdị nkwụghachi ọ bụla.
Ego Back nkwa
Ndị na-ege ntị na-enye ndị ahịa ya nhọrọ ka ha weghachi ego ha ma ọ bụrụ na egboghị mkpa ndị ahịa, n'ime ụbọchị 30 nke nzụta. ma ọ bụ iwu enyefeghị ka anyị kọwara na weebụsaịtị. Ndị na-ege ntị nwere ike ịnye ego nkwụghachi ụgwọ maka ọrụ emechara nke ọma, naanị ya nwere ezi uche. A ghaghị ịhazi ihe ndị a na ntinye aka na usoro kwesịrị ekwesị.
Cheta na: Enweghị nkwụghachi ma ọ bụ nnọchi ma ọ bụrụ na anyị atụlela ihe egwu ahụ ma ị kwenyere na nke ahụ.
Ndị na-ege ntị na-enye akwụkwọ ikike ejiri njigide / njigide mmachi na ụfọdụ ọrụ ha. Ọ bụrụ na onye ahịa jiri otu ọrụ AudienceGain wee tụfuo ndị na-eso ụzọ, mmasị, echiche, na / ma ọ bụ egwuregwu ndị AudienceGain nwetara karịrị ego ebubigara karịa, ndị na-ege ntị nwere ike ịnapụta ndị na-eso ụzọ na-arụkọ ọrụ, mmasị, echiche na / ma ọ bụ na-arụ ya ezi uche. Ọrụ ọ bụla na-enye oge dị iche iche maka Nlekọta Nchịkọta Ndị Na-ege Ntị.